Shirkadaha Qalinka Microneedling iyo Warshadda | Shiinaha Soosaarayaasha Qalinka Microneedling
Qalitaanka microneedling ee finanka laga saarayo
Microneedle derma pen A6 waa nooc heer sare ah, waa jir bir ah, tayo aad u wanaagsan iyo nolol dheer, wuxuu ku yimaadaa 2pcs baytariyada dib loo soo buuxin karo, adiguna waxaad ku hagaajin kartaa dhererka hadba sida ay u kala duwan yihiin. Waad u adeegsan kartaa si aad uga takhalusto calaamadaha fiditaanka, finanka oo laga baxo, iyo wejiga oo kor loo qaado. La shaqee nuxurka ku habboon, soo bandhig dareere, Si wax ku ool ah ugu guuleysta xaaladda maqaarka ugu fiican.
Nidaamka wareejinta Derma wuxuu horseeday qalinka microneedle
Model Classical Der280, Naqshadeynta biraha qalinka, quruxda iyo tayada sare leh, waa moodal fara badan, waxay la timaadaa 7pcs nal hogaamiya oo kala duwan, waad beddeli kartaa iftiinka kala duwan, iyadoo loo eegayo baahiyo kala duwan. Waxay si fiican u saari kartaa finanka, wajiguna wuxuu dhaqso u qaadid haddii aad rabto inaad dib u iibiso alaabtan, waxaan taageeri doonnaa adeegga OEM, Ku xardho astaantaada qalinka.
Microneedling Mashiinka kaxeynta laalaabka RF
Mashiinka microneedling rf waa mashiinka microneedle-ka badan, maaraynta microneedle si looga saaro finanka finanka, dib u soo celinta maqaarka, la imow laser-ka laser, waxaa loogu talagalay qaadista maqaarka iyo duuduubista duuduubka, natiijadu way ka fiicantahay hal-abuurka. Waxaan helnay jawaab celin badan oo wanaagsan.
mashiinka qurxinta joogtada ah
Mashiinka noocan ah pmu waa iib iib kulul, waa teknolojiyad dijitaal ah, wuxuu leeyahay laba nooc, mid waa qaabka pmu, sunnaha, qadka indhaha, tattoo bushimaha, mid kale waa habka mts, daryeelka maqaarka, ka saarista nabarrada maqaarka, maqaarka oo la cusbooneysiiyo.
Qalinka sunniyaha dhijitaalka ah ee dijitaalka ah ayaa sameeya mashiinka V8
Mashiinka ka samaysan V8 waa mashiin multifunctuon ah, wuxuu leeyahay laba gacan, A iyo B, Qalinku waa mid isdaba joog ah, tatoo 4 nooc oo qaybo kala duwan ah, suniyaha, indhaha, bushimaha iyo areola. qalinka kale waa nidaamka daaweynta microneedle, qaadista maqaarka, laalaabidda duuduubka, maqaarka oo caddeeya iwm Wax muhiim ah, A iyo B xamili karaan isla waqtigaas, waa mid aad ugu habboon, isla markaasna, waxaad isku hagaajin kartaa 10 heerarka xakamaynta xawaaraha, sida aad ugu baahan tahay
Qalinka microneedling Der270 oo leh laba baytariyada kumbiyuutarada
Qaabkan qalinka microneedling waa iibinta ugu kulul, oo leh laba baytariyaal gudaha ah, qalinka derma wuxuu la yimaadaa laba kumbuyuutar kaydadka irbadda bilaashka ah, qalinkani wuxuu si wax ku ool ah u caddeeyaa maqaarka, ka saarista nabarrada maqaarka, daaweynta timo luminta, ka saarista calaamadaha fiditaanka.
Nidaamka microneedle korontada qalinka derma dhererka hagaajin karo
Qalinka tayada sare leh ee loo yaqaan 'microneedle derma pen', dhererka la fili karo ee laga bilaabo 0-2.5mm, waxaadna dooran kartaa cirbado kala duwan, cirbadaha 12/9/36/42, sida aad ugu baahan tahay. Isticmaalka kaaliyeyaasha ah qodobbada la xiriira ayaa si fiican u saari kara finanka, saameyntuna waa mid aad u muuqata
Qalitaanka microneedle derma qalinka X5
Qaab cusub oo qalinka microneedle derma ah, naqshad guduud ah, Ka dhig mid caan ah, dherer la isku hagaajin karo, laga bilaabo 0-2.5mm, sidaad ugu baahan tahay, waxaad dooran kartaa irbad kala duwan. waxaad ka beddeli kartaa xawaaraha 1-5level.
qalin derma cusub oo leh shaashad muujinaysa heerka
Tani waa qalin derma cusub oo leh cirbado fur. waxay leedahay shaashad muujinaysa heerka.
Qalinka derma light lightest
Halbeegga wax soo saarka: Magaca badeecada LED elctric derma pen Qalabka korontada soo celin kara Adabtarada 4.2V-500MA Miisaanka Jirka ugu weyn 102g Cabbirka 17 * 2.1cm Xidhmada 18 * 11 * 4.8cm Astaamaha: Qaabka tayada sare leh 7pcs wuxuu horseeday iftiinka maqaarka kala duwan. Batariga 2pcs, waxaad dooran kartaa qaab kale oo aad ku isticmaali karto. laydh horseed ah: Iftiinka cas ayaa loogu talagalay maqaarka oo la caddeeyo. Iftiinka cagaaran waxaa loogu talagalay laalaabka lusha. Iftiinka buluuga ah waxaa loogu talagalay kor u qaadista maqaarka xasaasiga ah. Iftiinka huruudda ah ayaa loogu talagalay mugdiga mugdiga ah. Iftiin purple waxaa loogu talagalay qanjidhada. Caddaan cad ...
Qalinka Dr a6 derma ee maqaarka u cusboonaysiinta
Qalinka derma waa dr a6 microneedling pen ee daryeelka maqaarka, waa qalinka iyo qalinka derma koronto, wuxuu leeyahay laba kumbuyuutar kumbuyuutar, iyo xeedho, tani waxay kaa ilaalin doontaa inaad haysato awood kugu filan oo aad ku sameyso daaweynta microneedling. 1/3/7/9/12/32 / nano si aad u doorato.
qalinka microneedling prp mesotherapy derma oo leh iftiin iftiin leh
Moodelkan prp derma microneedling meso qalinka wuxuu isku daraa teknoolojiyad badan, shaqada meso, shaqada qalinka derma iyo shaqada iftiinka hogaamineysa, tani waxay sare uqaadeysaa natiijada daryeelka maqaarka.Qiyaas ahaan qalinkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo daaweynta qalinka maqaarka maqaarka iyo kobcinta nuugista alaabada daryeelka maqaarka, sida sida daaweynta prp.